Saturday January 14, 2017 - 09:45:18 in Wararka by Super Admin
Jammeh ayaa la weydiistay in 19-ka bishan oo xilka wareejiyo, balse wuu diiday soo jeedintaas.
Wakiilka Qaramada Midoobeey, Maxamed Ibnu Jambas, wuxuu u sheegay golaha amniga in ECOWAS ay raadineyso in UN loo ogolaado inay ciidamo geyso Gambia.
Waxyaabaha ay sameyndoonaan waxaa ka mid ah inay awood adeegsadaan.
Kumannaan qof oo shacab ah ayaa billaabay inay dalka Gambia ka qaxaan ayagoo ka cabsi qaba dagaal inuu dhaco.
Badankooda waxay u cararayaan dalka deriska la ah ee Senegal.